Dagaal beeleed khasaare geystay oo ka dhacay Gobolka Shabellaha dhexe – STAR FM SOMALIA
Dagaal beeleed khasaare geystay oo ka dhacay Gobolka Shabellaha dhexe
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in khasaare nafeed uu ka dhashay dagaal u dhaxeeya maleeshiyo beeleed, kaasi oo ka dhacay deegaanno gobolkaasi ka mid ah.
Ku dhawaad Shan ruux ayaa ku geeriyootay dagaalkan oo ka dhacay deegaanno ku dhaw Degmada Cadale ee Gobolka Shabellaha Dhexe, sida ay inoo sheegeen goob joogayaal ku sugan degmadaasi, iyadoo dhaawacana uu intaasi ka badan yahay.
Dagaalkan ayaa la soo sheegayaa inuu salka ku hayo aano qabiil, iyadoo saacadihii ugu dambeeyey siyaabo kala duwan ay Labadan dhinac ugu dagaallameen halkaasi.
Dagaalkaan ayaa xoogiisa salka ku haayo dilalka qorsheysan oo horay u dhacay, kaasi oo isku bedelay dagaal labada beelood si toos ah u dhexmara.
Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe weli kuma aysan bixin dagaal beeleedkaan Khasaaraha geystay ee Gobolkaasi ku dhexmaray dadka wada halkaasi.
Ma muuqato dedaallo nabadeed oo lagu kala dhexgalayo dhinacyada isku haya gobolka Shabellaha Dhexe, walow la sheegayo inuu socdo abaabul ay wadaan Odayaasha dhaqanka.
Wariye C/maalik Coldoon oo maanta maxkamad lagu saarayo Hargeysa
Ciidamada Nabad Sugida Jubbaland oo gacanta ku dhigay Miinooyin.